Haddii aad doonayso inaad iibsato gaari loo Intaa waxaa dheer in ay qabanayaan dheecaanada kale in aan ku soo jeediyay in aad hubiso, waxa kale oo aad u baahan tahay si aad u hubiso ka bareegyada baabuurta. Biriigyada gaari jira hal wax oo loogu talagalay in ay duugoobin. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]
In post hore waxaan daboolay saliid kumbyuutarradeedu kiiska engine, sida loo hubiyo iyo waxa la raadinayo. In this post aan dabooli hubin doonaa dheecaan gudbinta iyo waxa la raadinayo. Next in saliidda engine, saliidda gudbinta malaha waa dheecaan soo socda ugu muhiimsan. It is vital for automatic transmissions to have the […]
Gadashada baabuur loo isticmaalay uu noqon karaa mid howl culus aya hortaala. Waxaa jira arimo dhowr ah oo aad naftaada ka hubin kartaa si loo xaqiijiyo in aad helayso gaari wanaagsan oo tayo fiican leh. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay si aad u hubiso marka aad gadaneyso gaari loo isticmaalo waa saliid kumbyuutarradeedu engine kiiska. In this post […]